Azia Afovoany: Hevitra sy zava-baovaon’ny BarCamp · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2011 19:50 GMT
BarCamp ao Azia Afovoany, valandresaka tsy miresa-barotra faha-efatra ho an'ireo za-draharaha amin'ny valan-tserasera no natao tao Almaty, Kazakhstan, ny 15-17 Aprily 2011, ka nahavory ireo mpanao gazety, bilaogera, manam-pahaizana manokana momba ny TIC , mpikirakira ny web sy ireo rehetra izay liana amin'ny Aterineto sy ny fomba vaovao fampitam-baovao.
Zava-baovao ny BarCamp. Tao Palo Alto no natao ny BarCamp voalohany , ary tao California ny taona 2005 izay nahitana mpandray anjara 200. Nanomboka hatreo, nisy hatrany ny BarCamps notontosaina tany an-tanandehibe maherin'ny 350 manerana izao tontolo izao, tafiditra ao anatin'izany i Azia Afovoany.
Tamin'ity taona ity, nokarakaraina tao Almaty ny BarCamp tao Azia Afovoany. Olona eo amin'ny 1500 no voaraikitra tao amin'ny tranokala, ary eo ho eo amin'ny 600 amin'ireo no nandray anjara tamin'ny hetsika fa ny hafa kosa nanaraka izany tao amin'ny Facebook sy Twitter (#barcampca11, #barcampca2011). Raha avy amin'ny firenena Azia Afovoany ny ankamaron'ny mpandray anjara (Kazakhstan, Kyrgyzstan sy i Uzbekistan), manam-pahaizana manokana momba ny TIC sy manam-pahaizana momba ny valan-tserasera avy any Rosia, dia mba nandray anjara tamin'ny hetsika koa i Eoropa Andrefana sy Atsinanana.
Ohatra, nandritra ny BarCamp TechTalk momba ny fampianarana nomerika , fanontaniana mikasika ny fahasamihafan'ny fampitam-baovaon'olo-tsotra sy ny asan-gazety mahazatra ary koa ny asa sahanin'ny valan-tserasera no navoitra. Iray tamin'ireo nandray anjara tamin'ny adihevitra i Frederick Emrich, mpampianatra mpanampy izay mampianatra ny asa fanaovan-gazety sy ny fifandraisana ao amin'ny Sekoly ambony momba ny fitantanana, toekarena ary fikarohana stratejika ao Kazakhstan, nilaza izy fa mikasa ny hampiditra fitaovana ampiasaina amin'ny fampitam-baovao vaovao amin'ny fampianarany momba ny gazety mahazatra:
Ny serasera marolafy (Multimedia) sy ny hevitra ho an'ny asa fanaovan-gazety vaovao no niadian-kevitra nandritra ny fampahafantarana ny Newreporter.org, izay tetikasa aterineto mikasika ny fampahalalam-baovao ho fitadiavam-bola sy fampahalalam-baovao an-tserasera. Afaka jerena eto ny fandikan-teny an-tserasera momba ny fampahafantarana
Mety maharakotra ny lohahevi-dehibe rehetra ny valandresaka momba ny teknolojian'ny aterineto sy ny asa fanaovan-gazety vaovao raha tsy iadian-kevitra ny fiarovana ny serasera sy ny fitaovana ilaina. Araka izany, Alexey Bebinov, manam-pahaizana manokana momba ny cyber-sécurité (fiarovana an-tserasera) an'ny fikambanana manao asa soa (fondation) “ Andraikitra Raisin'ny Olom-pirenena momba ny Politikan'ny Aterineto” (CIIP)[Initiative citoyenne pour les politiques concerant Internet] no nampahafantatra ny fitaovana sy ny paikady amin'ny fiarovana ny serasera (aterineto). Etsy andaniny, niady hevitra momba ny tombotsoa amin'ny fampiasana ireo fitaovana toy ny Security In The Box, Hot Spot Shield(mpanjifa VPN), Tor Browser Bundle,Psiphon ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa.
Nampahafantarin'i Alexey Sidorenko ny Global Voices, mpanoratra ny tetikasa RuNet Echo sy i Adil Nurmakov, mpanoratra GV Azia Afovoany.
Raha teo am-pandrenesana ny fampahafantarana tao amin'ny Global Voices @BioCyberGear nanoratra hoe:
Toa manintona mpamaky sy bilaogera marobe ao Azia Afovoany ny Global Voices . Ohatra, @iTengry nanoratra hoe:
Misaotra #barcampca11 noho ny fihaonana tamin'ny olona vaovao ary fahitana ireo namana taloha. Nandeha tsara ny zava-drehetra, @mursya_ru @Agnesa sy ny ekipany – asa tena tsara!
Tontosa ny atrikasa Super-speedy Widget, tontosa ny fanitarana tao anatin'ny minitra fohy, ka fotoana ankehitriny hialana sasatra sy mankafy ny tohin'ny #barcampca11🙂 (ary miasa…)